Kutsvaga Pfuma Yechokwadi​—⁠Ruka 16:⁠9 | Yokudzidza
“Zviitirei shamwari nepfuma isina kururama.”​—RUKA 16:9.
NZIYO: 122, 129
Tingashandisa sei pfuma kuti tisimbise ushamwari hwedu naMwari?
Tingaitei kuti tisava varanda vechikamu chezvekutengeserana chenyika ino?
Nei watsunga kutsvaga pfuma yezvekunamata?
1, 2. Munyika ino, nei varombo vachiramba varipo?
MAZUVA ano, mamiriro akaita zvinhu panyaya dzeupfumi anorwadza uye ari kuita kuti vamwe vatambure zvikuru. Vechidiki vari kuparapatika kutsvaga mabasa vachiashaya. Vakawanda vanoisa upenyu hwavo pangozi kuti vatamire kunyika dzakabudirira. Urombo huri kwese kwese, kunyange munyika dzakabudirira. Uye vapfumi vari kuwedzera kupfuma, varombo vachiwedzera kuva varombo. Zvinofungidzirwa kuti chikamu chimwe chete kubva muzana chevanhu vakapfuma kupfuura vese panyika chine upfumi hwakaenzana nehwevamwe vanhu vese vari panyika hwabatanidzwa. Zviri pachena kuti hapana anogona kuramba kuti mabhiriyoni evanhu ari kugara muurombo asi vamwe vaine upfumi hwakawanda zvekuti hunogona kuchengeta vana vavo nevazukuru vevazukuru vavo. Mashoko aJesu ekuti “varombo munogara muinavo,” anoratidza kuti aibvuma kuti ndizvo zvazviri. (Mako 14:7) Nei paine musiyano wakakura kudaro?
2 Jesu ainzwisisa kuti zvekutengeserana zvichange zvisisipo kana Umambo hwaMwari hwauya. Nyika yaSatani inoumbwa nevezvematongerwo enyika, vezvitendero uye vezvekutengeserana vane makaro avo vanomiririrwa ‘nevatengesi’ vanotaurwa pana Zvakazarurwa 18:3. Kunyange zvazvo vanhu vaMwari vachiramba vakazviparadzanisa zvachose nezvematongerwo enyika uye chitendero chenhema, vakawanda vavo havakwanisi kuzviparadzanisa zvachose nechikamu chezvekutengeserana chenyika yaSatani.
3. Tichakurukura mibvunzo ipi?
3 SevaKristu tingaita zvakanaka kuongorora maonero atinoita chikamu chezvekutengeserana nekuzvibvunza mibvunzo yakadai seiyi: ‘Ndingashandisa sei pfuma yangu kuti ndiratidze kutendeka kuna Mwari? Ndingaitei kuti ndisanyura mune zvekutengeserana? Ndezvipi zvakaitika zvinoratidza kuti vanhu vaMwari vanovimba naye zvizere munyika ino yakaoma?’
MUFANANIDZO WEMUTARIRI ASINA KURURAMA
4, 5. (a) Chii chakaitika kumutariri wemumufananidzo waJesu? (b) Jesu akapa vateveri vake zano ripi?
4 Verenga Ruka 16:1-9. Mufananidzo waJesu wemutariri asina kurarama unoita kuti tifunge. Pashure pekupomerwa kuti akanga achipambadza zvinhu, mutariri wacho akashandisa “uchenjeri hunobatsira” kuti “azviitire shamwari” dzaizomubatsira paaizobviswa pautariri. * Jesu akanga asiri kukurudzira vadzidzi vake kuti vaite zvinhu zvisina kururama kuti vakwanise kurarama munyika ino. Akaratidza kuti unhu hwakadaro ‘ndehwevanakomana vomumamiriro ezvinhu epanguva ino,’ asi akashandisa mufananidzo uyu kuti ape chidzidzo chinokosha.
5 Jesu aiziva kuti, sezvakaitika kumutariri uyu akanga ava panguva yakaoma, vateveri vake vakawanda vaizofanira kushanda kuti vawane cheuviri munyika ino isina kururama yezvekutengeserana. Saka akavakurudzira kuti: “Zviitirei shamwari nepfuma isina kururama, kuti, kana iyoyo yapera, [Jehovha naJesu] vakugamuchirei munzvimbo dzokugara dzisingaperi.” Tingadzidzei pazano raJesu?
6. Tinoziva sei kuti zvekutengeserana zvaisava pachinangwa chaMwari?
6 Kunyange zvazvo Jesu asina kutsanangura kuti nei akati pfuma ‘haina kururama,’ Bhaibheri rinonyatsobudisa pachena kuti zvekutengeserana zvakanga zvisiri pachinangwa chaMwari. Jehovha akapa Adhamu naEvha zvese zvavaida pakurarama muEdheni. (Gen. 2:15, 16) Pava paya, mweya mutsvene pawakashanda muungano yevakazodzwa yepanguva yevaapostora, “hapana kunyange nomumwe aiti zvinhu zvaaiva nazvo ndezvake oga; asi kuti zvose zvavaiva nazvo zvaiva zvavo vose.” (Mab. 4:32) Muprofita Isaya akataura kuti paizosvika nguva yekuti vanhu vese vaizowana zvinhu zviri panyika vasingabhadhari. (Isa. 25:6-9; 65:21, 22) Asi nguva iyoyo isati yasvika, vateveri vaJesu vaizoda “uchenjeri hunobatsira” kuti vakwanise kurarama vachishandisa “pfuma isina kururama” yenyika ino, uku vachifadza Mwari.
KUSHANDISA PFUMA ISINA KURURAMA NEKUCHENJERA
7. Izano ripi ratinowana pana Ruka 16:10-13?
7 Verenga Ruka 16:10-13. Mutariri wemumufananidzo waJesu akatsvaga shamwari kuti dzizomubatsira. Zvisinei, Jesu akakurudzira vateveri vake kuti vaite shamwari kudenga kwete nechinangwa chekuti vabatsirwe. Mavhesi anozotevera anotaura nezvekushandisa “pfuma isina kururama” achizvibatanidza nekutendeka kuna Mwari. Jesu aireva kuti tinogona kuratidza kuti ‘takatendeka’ nemashandisiro atinoita pfuma iyoyo kana tikava nayo. Tinozviita sei?
8, 9. Taura mienzaniso yezviri kuitwa nevamwe pakushandisa pfuma isina kururama vachiratidza kuti vakatendeka.
8 Imwe nzira yekuratidza nezvinhu zvedu kuti takatendeka ndeyekupa zvipo zvemari yekutsigira basa rekuparidza remunyika yese rakataurwa naJesu kuti raizoitwa. (Mat. 24:14) Kamwe kasikana kekuIndia kaigara kachiisa mari mukabhokisi, kachitorega kutenga matoyi kuti kave nemari yekuisa imomo. Kabhokisi kacho pakakazara, kakapa mari yacho kuti ishandiswe pabasa rekuparidza. Imwe hama yekuIndia ine purazi remacoconut yakapa macoconut akawanda kuHofisi Yeshanduro yemutauro wechiMalayalam. Sezvo hofisi yacho ichifanira kutenga macoconut, hama iyi yakafunga kuti kupa chipo chemacoconut kwaizobatsira chaizvo kupfuura kupa mari. Ihwohwo uchenjeri hunobatsira. Saizvozvowo, hama dzekuGreece dzinogara dzichiendesa mafuta emuorivhi, chizi uye zvimwewo zvekudya kuti zvishandiswe nemhuri yeBheteri.
9 Imwe hama yekuSri Lanka yava kugara mhiri kwemakungwa, yakaita kuti pamba payo paitirwe misangano nemagungano uye kuti pagarwe nehama nehanzvadzi dziri mubasa renguva yakazara. Hama iyi inozvipira kurasikirwa nemari asi iri kubatsira zvikuru vaparidzi vekuSri Lanka vanoshayiwa. Mune imwe nyika matisina rusununguko rwekuparidza, hama dzinoita kuti dzimba dzadzo dzishandiswe seDzimba dzeUmambo, izvo zviri kubatsira mapiyona akawanda nevamwewo vane mari shoma kuti vawane pekupindira misangano vasingabhadhari.
10. Tinowana makomborero api kana tikava nerupo?
10 Mienzaniso yabva kutaurwa inoratidza kuti vanhu vaMwari ‘vakatendeka pazvinhu zvidukuduku,’ kureva pakushandisa kwavanoita zvinhu zvavo, izvo zvisingakoshi kana zvichienzaniswa nepfuma yekunamata. (Ruka 16:10) Shamwari idzi dzaJehovha dzinonzwa sei padzinoshandisa zvinhu zvadzo saizvozvo? Dzinonzwisisa kuti kupa inzira yekuwana pfuma “yechokwadi.” (Ruka 16:11) Imwe hanzvadzi inogara ichipa zvipo zvekutsigira basa reUmambo inotaura nezvechikomborero chainowana ichiti: “Nemhaka yekuti ndinogara ndichipa, pane zvanga zvichiitika kwandiri makore ese aya. Ndakaona kuti pandinowedzera kupa ndinowedzerawo kuva munhu anoregerera, ane mwoyo murefu nevamwe, asingagari akaora mwoyo uye anobvuma mazano.” Vanhu vakawanda vakaona kuti kupa kunovabatsira zvikuru.—Pis. 112:5; Zvir. 22:9.
11. (a) Kuva nerupo kunoratidza sei “uchenjeri hunobatsira”? (b) Kuenzaniswa kupi kwemari kuri kuitika pakati pevanhu vaMwari? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
11 Tinoratidzawo “uchenjeri hunobatsira” patinoshandisa pfuma yedu pakutsigira vamwe kuita ushumiri. Vaya vane pfuma asi vasingakwanisi kuita basa renguva yakazara kana kutamira kune imwe nyika vanogutsikana nekuziva kuti zvipo zvemari zvavanopa zviri kutsigira ushumiri huri kuitwa nevamwe. (Zvir. 19:17) Zvipo zvinobatsira kuti pave nemabhuku uye zvinotsigira basa rekuparidza munzvimbo dzine urombo asi dziine vanhu vakawanda vari kuuya muchokwadi. Kwemakore akawanda, hama dzemunyika dzakadai seCongo, Madagascar neRwanda, dzaifanira kusarudza kuti dzotenga zvekudya zvemhuri here kana kuti dzotenga Bhaibheri, iro rinowanzotengwa nemari yakaenzana neyadzinotambira pavhiki kana kuti pamwedzi. Iye zvino, pachishandiswa zvipo zvevakawanda uye ‘kuenzaniswa’ kwemari, sangano raJehovha riri kuita kuti maBhaibheri ashandurwe uye apiwe munhu mumwe nemumwe mumhuri uyewo vaya vari kudzidza Bhaibheri. (Verenga 2 VaKorinde 8:13-15.) Saka vaya vari kupa nevari kugamuchira vanokwanisa kuva shamwari dzaJehovha.
KUSANYURA “MUMABASA OKUTENGESERANA OUPENYU”
12. Abrahamu akaratidza sei kuti aivimba naMwari?
12 Imwe nzira yekuti tive shamwari dzaJehovha ndeyekurega kunyanya kubatanidzwa nenyika yezvekutengeserana toshandisa nguva yedu kuti titsvage pfuma “yechokwadi.” Abrahamu, murume aiva nekutenda, akateerera ndokusiya guta reUri rakanga rakabudirira kuti anogara mumatende uye kuti asimbise ushamwari hwake naJehovha. (VaH. 11:8-10) Akaramba achivimba naMwari kwete nezvinhu. (Gen. 14:22, 23) Jesu aida kuti vanhu vave nekutenda kwakadaro. Akaudza rimwe jaya rainge rakapfuma kuti: “Kana uchida kuva akakwana, enda unotengesa zvinhu zvako upe varombo uye uchava nepfuma kudenga, uuye uve muteveri wangu.” (Mat. 19:21) Jaya iroro raisava nekutenda kwakafanana nekwaAbrahamu, asi pane vamwe vakaratidza kuti vaivimba zvizere naMwari.
13. (a) Pauro akapa Timoti zano rekutii? (b) Tingashandisa sei zano raPauro mazuva ano?
13 Timoti aiva murume ane kutenda. Pashure pekunge Pauro amudana kuti “murwi akanaka kwazvo waKristu Jesu,” akamuudza kuti: “Hapana munhu anoshanda somurwi anozvipinza mumabasa okutengeserana oupenyu, kuti afarirwe nouya akamupinza basa somurwi.” (2 Tim. 2:3, 4) Vateveri vaJesu mazuva ano, kusanganisira uto revashumiri vari mubasa renguva yakazara vanopfuura miriyoni vanoita zvese zvavanogona kuti vashandise zano raPauro. Vanoramba kutorwa mwoyo nezvinhu zvinoshambadzwa munyika vachiyeuka zano rekuti: “Uya anokwereta anova muranda womunhu anomukweretesa.” (Zvir. 22:7) Satani anoda kuti tipedze nguva yedu yese nesimba redu rese tiri varanda venyika yake yezvekutengeserana. Zvimwe zvisarudzo zvatinoita zvinogona kuita kuti tive muuranda hwezvikwereti kwemakore. Vamwe vanotora zvikwereti zvekutenga dzimba, zvemari dzechikoro, zvekutenga motokari kunyange zvekuita michato yemaoresa. Tinoratidza uchenjeri hunobatsira patinoita kuti upenyu hwedu husava netwakawandawanda toderedza zvikwereti nemari yatinoshandisa kuitira kuti tive varanda vaMwari kwete venyika yezvekutengeserana.​—1 Tim. 6:10.
14. Tinofanira kutsunga kuitei? Taura mienzaniso.
14 Kuti upenyu hwedu husava netwakawandawanda, tinofanira kuisa Umambo hwaMwari pekutanga. Mumwe murume nemudzimai vaiva nebhizinesi rakakura raivapa mari yakawanda. Zvisinei, chido chavo chekupindazve mubasa renguva yakazara chakaita kuti vatengese bhizinesi racho, bhoti ravo nezvimwewo zvinhu. Vakabva vazvipira kubatsira pakuvaka mahofisi edu makuru kuWarwick, New York. Vakava nechikomborero chikuru chekushanda nevabereki vemurume kwemavhiki akati kuti, avo vaishandawo pakuvaka kuWarwick uye chekushumira paBheteri nemwanasikana wavo nemukwasha wavo. Mumwe piyona anogara muColorado, kuU.S.A., akawana basa raaishanda nguva shoma pavhiki mune rimwe bhengi. Vakuru vebhengi vakafara chaizvo nebasa rake zvekuti vakamukumbira kushanda mazuva ese vachimupa mari yakapetwa katatu. Zvisinei, sezvo basa racho raizokanganisa ushumiri hwake, akariramba. Iyi inongova mienzaniso mishoma yezvakawanda zviri kusiyiwa nevashumiri vaJehovha. Kutsunga kwatinoita kuisa Umambo pakutanga kunoratidza kuti tinokoshesa ushamwari naMwari uye pfuma yekunamata kupfuura chero chii zvacho chatingapiwa nenyika yezvekutengeserana.
15. Ipfuma ipi inoita kuti tigutsikane zvechokwadi?
15 Kuva neupfumi hwakawanda hakurevi hako kuti tiri kukomborerwa naMwari. Jehovha anokomborera vaya ‘vakapfuma pamabasa akanaka.’ (Verenga 1 Timoti 6:17-19.) Semuenzaniso, Lucia * paakaziva kuti kuAlbania kwaidiwa vaparidzi, akatamira ikoko muna 1993 achibva kuItaly, asina basa rekuzviriritira asi achivimba zvizere naJehovha. Akadzidza mutauro wechiAlbanian uye abatsira vanhu vanopfuura 60 kuti vasvike pakuzvitsaurira. Kunyange zvazvo vanhu vaMwari vakawanda vasingaparidzi mundima dzinogamuchirwa chokwadi zvakadaro, chero zvatinoita kuti tibatsire vamwe kuwana nzira yeupenyu uye kuti varambe vari mairi ticharamba tichizvikoshesa nekusingaperi.​—Mat. 6:20.
16. (a) Chii chichaitika kunyika yezvekutengeserana yanhasi? (b) Zvatinoziva nezveramangwana zvinofanira kuita kuti tione sei pfuma?
16 Pana Ruka 16:9, Jesu paakati “kana [pfuma isina kururama] yapera,” akanga achitoreva kuti pfuma iyoyo yaizopera. Kuvharwa kwemabhengi uye kusagadzikana kweupfumi kuri kuitika mazuva ano ekupedzisira mune dzimwe nyika hapana zviripo kana tichienzanisa nezvichaitika pasi rese mune ramangwana. Nyika yese yaSatani iyo inosanganisira zvematongerwo enyika, zvitendero zvenhema uye zvekutengeserana ichatokundikana. Ezekieri naZefaniya vakaprofita kuti goridhe nesirivha, izvo zvava nemazana emakore zvichikosheswa munyika yezvekutengeserana, zvichashaya basa. (Ezek. 7:19; Zef. 1:18) Taizonzwa sei tava pedyo nekufa, tobva taona kuti takarasikirwa nepfuma yechokwadi kuti tiwane makutukutu “epfuma isina kururama” yenyika ino? Zvimwe taizonzwa semurume anoita upenyu hwake hwese achishandira murwi wemari asi ozoona kuti mari yacho ndeyekunyepera. (Zvir. 18:11) Hapana mubvunzo kuti pfuma yakadaro ichapera, saka usarasikirwa nemukana wekuishandisa kuti ‘uzviitire shamwari’ kudenga. Chero zvatinoita kuti basa reUmambo hwaJehovha rienderere mberi zvinoita kuti tipfume pakunamata.
17, 18. Shamwari dzaMwari dzichawanei mune ramangwana?
17 Pachauya Umambo hwaMwari, rendi uye zvikwereti zvedzimba zvichapera, zvekudya zvichange zviri zvemahara uye zviri mavhu nemarara uye pachange pasisadiwe mari yekurapwa. Mhuri yaJehovha yepanyika ichawana zvinhu zvakanakisisa zvepanyika. Goridhe, sirivha nematombo anokosha zvichange zviri zvekugadzirisa zvishongo, kwete zvekuitisa bhizinesi. Miti, matombo uye simbi zvemhando yepamusoro zvichange zvichiwanika mahara kuti vanhu vazvishandise pakuvaka misha yakanaka. Shamwari dzichatibatsira zvichibva pamwoyo kwete nekuti dzinenge dzichida mari. Tichange tichigovana zvinhu zvepanyika.
18 Izvi zvingori zvimwe zvezvishoma zvichapiwa vaya vanoita shamwari kudenga. Vashumiri vaJehovha pasi pano vachafara zvekufara zviya pavachanzwa mashoko aJesu ekuti: “Uyai, imi makakomborerwa naBaba vangu, garai nhaka youmambo hwamakagadzirirwa kubvira pakuvambwa kwenyika.”​—Mat. 25:34.
^ ndima 4 Jesu haatauri kuti zvaipomerwa mutariri uyu zvaiva zvechokwadi here kana kuti kwete. Anoisa pfungwa pane zvakazoitwa nemutariri, kwete pane zvakaita kuti adzingwe basa.
^ ndima 15 Nyaya youpenyu yaLucia Moussanett iri muMukai! yaJuly 8, 2003 mapeji 28-32.
UNGAPA SEI CHIPO CHEMARI PAINDANETI
Basa redu rekudzidzisa vanhu Bhaibheri uye rekubatsira vanhu rinotsigirwa nezvipo. Kuti upe chipo paindaneti munyika dzinobvumirwa kudaro, enda pajw.org wobaya pakanzi “Ipa Chipo Chekutsigira Basa Redu Remunyika Yose” nechepazasi pepeji chero ipi zvayo.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kutsvaga Pfuma Yechokwadi